organique gluten maimaim-poana adzuki tsaramaso fettuccine - China organika gluten maimaim-poana adzuki tsaramaso fettuccine Supplier,Factory -Qianna
Tianjin QianNa fambolena
niantso anay na oviana na oviana +86-22-26886596
Alefaso izahay na oviana na oviana EMAIL qianna@qiannafoods.com
gluten maimaim-poana tsaramaso paty
gluten vary maimaim-poana paty
Home » Products » gluten maimaim-poana tsaramaso paty
organique gluten maimaim-poana adzuki tsaramaso fettuccine
Place ny Origin:
35andro taorian'ny fandoavam-bola
3000 taonina / taona
Organic adzuki fettuccine tsaramaso na ny fanaka adzuki koba tsaramaso , rano . manana ara-pahasalamana maro ny soa.
Adzuki tsaramaso ilaina ho boosting levitra. Izy ireo hanampy anao hanana fomba fiaina ara-pahasalamana. Midika izany izy ireo dia kely amin'ny kaloria ary afaka hameno ny kibo, amin 'izany mahatonga anao tsy mihinana ary farany dia hanampy anao bebe kokoa vatana matavy very nandritra ny fotoana. Iray kapoaka amin'ny tsaramaso adzuki ahitana ihany 300 kaloria .
2. proteinina Soa:
Adzuki tsaramaso ahitana proteinina be dia be mba hahasoa ny fo. Proteinina mampihena ny fankamamiantsika ny LDL kolesterola sy mampitombo ny kolesterola HDL. amin'ny proteinina, dia afaka mampitombo ihany koa ny vatana bahoaka, hery, habe sy ny hozatra .
3. fibre Soa:
Adzuki tsaramaso misy fibre ihany koa izay afaka mitondra soa ho anao amin'ny fomba maro. fibre, tena zava-dehibe, dia manampy amin'ny fikojakojana ny fahasalamana tsinay. Misy toe-javatra ihany koa ny nampiseho ny fampihenana ny soritry ny tsinay mora narary, aretina amin'ny fihinanana ny fibre .
4. vitaminina Soa:
Vitaminina milalao tena anjara asa lehibe eo amin'ny fiarovana ny vatanao amin'ny aretina mitaiza sy ireo aretina lehibe toy ny homamiadana. Izany ihany koa ny tsy maintsy ho an'ny vehivavy bevohoka rehetra, izay mety hampihena ny mety ho fampandrosoana kanseran'ny nono, kanseran'ny tsinaibe sy ny fo homamiadana .
5. potasioma Soa:
Adzuki tsaramaso misy potasioma koa izay manampy amin'ny fampihenana ny tosi-drà . Sahaza fihinanana koa manakana tsy hahazo niteraka kilema amin'ny zazakely.
6. Lehibe Fa ny hoditra no fijeriny:
Tsaramaso Adzuki Azo ampiasaina ho toy ny hoditra exfoliator. Zava-Tena ilaina ho an'ny rehetra, saron-tava face. Indro ny zavatra tena tokony hiezaka. Raiso telo adzuki lovia kely ny tsaramaso sy ny sotrokely ny Aloe Vera. Afangaroy azy ireo ary mampihatra manerana ny tarehy. Aoka hijanona 15 minitra ka sasao eny amin'ny rano mangatsiaka. Adzuki tsaramaso ihany koa ny fantatra noho ny fampihenana ny aretina ary hoditra mana-maivana swellings .
7. Tsara indrindra ho Voa:
Adzuki tsaramaso no mahasoa ho an'ny voa koa. Araka ny manam-pahaizana, dia manampy amin'ny fampandehanana mifehy ny voa sy hamerina ny fifandanjana ny hamandoana . Tena tsara ny maka adzuki tsaramaso indroa isan-kerinandro mba hahabetsaka ny soa.
Ny fomba lehibe mba detoxify ny vatana indray mandeha isan-kerinandro dia amin'ny alalan'ny fanampiana adzuki tsaramaso ny sakafo. Ny tsaramaso no hampihena harerahana sy detoxify na ny hoditra sy ny sodina. Izany dia hanatsarana ny mihasimba ny hoditra sy ny hahatonga anao hita miramirana sy tsara tarehy rehefa mandeha ny fotoana.
isaky ny fanompoana
isaky ny 100g
775Prot / 185k kal
1549Prot / 370kcal
Mitovy toy ny sira
Fangaro: voajanahary adzuki tsaramaso vovoka, rano
talantalana fiainana: 24volana
organique gluten volontsôkôlà vary maimaim-poana rotina
organique gluten maimaim-poana adzuki tsaramaso fohy paty(3.7MG)
organique gluten maimaim-poana soybean maitso fettuccine
organique gluten maimaim-poana soybean fettuccine
Tianjin QianNa Fambolena Products Ind.& Trading Co., Ltd.
Ampiana hoe: RM 2406, No. 4 Beichen Building, Beichen District, Tianjin 300400, Shina
Ho voalohany hahafantatra momba ny vokatra farany
Adiresy mailaka Fanampin'anarana
Copyright © 2018 Tianjin QianNa Fambolena Products Ind.& Trading Co., Ltd.